महिनावारी कीन नियमित हुँदैन ? - IAUA
महिनावारी कीन नियमित हुँदैन ?
ramkrishna December 30, 2016	महिनावारी कीन नियमित हुँदैन ?
सुरु सुरुमा महिनावारी हुँदा , नियमित रुपमा महिनावारी नहुन सक्छ । महिनावारी समयमा नहुनुलाई, विज्ञानको भाषामा ओलिगो मेनेरिया भनिन्छ । यो अस्वभाविक महिनावारी हो जुन, महिलामा हुने हर्मोनको गढबढीले हुने गर्छ । डिम्बासयमा कुनै रोग लागेमा पनि महिनावारी ढिलो चाँडो हुन्छ । यदि महिनावारी महिनाको दुईपटक वा ८ दिनसम्म लगातार हुन्छ भने त्यसलाई मेनोरेजिया भनिन्छ । यो पनि अस्वभाबिक महिनावारी हो । यो ईस्ट्रोजन हर्मोनको मात्रा बढी भएमा हुन्छ ।
शुरुशुरुमा महिनावारी हुँदा पनि यस्तो समस्या आउँछ । कहिले २, ३ महिनामा एकपटक हुने वा कहिले एक महिनामा २,३ पटकसम्म महिनावारी हुनसक्छ । तर, पहिले नै महिनावरी भएको हो र अहिले यस्तो समस्या आएको हो भने पाठेघरको मुखमा संक्रमण हुँदा पनि यस्तो समस्या भएको हुनसक्छ । यसो हुनुमा अरु कारण पनि हुन सक्छ । यदि महिनावारी भएको बेला रक्तश्राब बढी हुन्छ भने, यसले हेमोग्लोबिन, एनिमिया जस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले महिनावारीका बेला यस्ता समस्या देखिए, बेलैमा जाँच गराउनु नै उत्तम उपाय हो ।
महिनावारी ढिला हुने कारण :
१६ बर्षसम्म पनि महिनावारी भएन भने यसलाई महिनावारी ढिलो भएको भन्न मिल्छ । महिनावारी ढिलो भएका किशोरीहरुको शारीरिक विकासको क्रम नै ढिलो हुन्छ । खासगरी सामान्य शारीरिक बिकास जस्तै , स्तन बढ्नु, काखीमा रौँ आउनु जस्ता परिवर्तन भएपछि , साधारणतया दुई बर्षभित्र महिनावारी भएको हुनुपर्छ । यदि यस्तो परिवर्तन आएको, दुई बर्षमा पनि महिनावारी भएन भने महिनावारी ढिलो भएको भन्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समयमा ९ बर्षदेखि नै पनि महिनावार िशुरु भएको रेकर्ड छ । महिनावारी बंशानुगत गुणमा पनि भर पर्न जान्छ । आफ्नो आमा कहिले महिनावारी भएकी थिईन् ? त्यसले पनि छोरीहरुको महिनावारी हुने उमेरमा अशर पार्छ । कहिलेकाहीं हर्मोनको मिसब्यालेन्सले पनि महिनावारी ढिलो हुन जान्छ । महिनावारी ढिला भए, सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको एकपटक महिला तथा स्त्रीरोग परामर्श केन्द्रमा गएर परामर्श लिनु नै हो ।
Previous Previous post: आफन्त र चिनेजानेको नाममा विदेश जानेहरु ठगिने क्रम धेरै
Next Next post: महिनाबारी भएको कति दिनमा बच्चा बस्छ?